N'ogbe Injectable 5721-91-5 Testosterone Steroid PowderTestosterone Decanoate iji nweta Muscle Manufacturer and Supplier |Taigui
Injectable 5721-91-5 Testosterone Steroid ntụ ntụTestosterone Decanoate iji nweta akwara.
Aha ngwaahịa: Testosterone decanoate
Synonyms: testosterone caproate; 4-Androsten-17beta-ol-3-one Decanoate, test deca
agwa: White crystalline ntụ ntụ.
Usoro ihe omimi: C29H46O3
Ibu ibu: 442.68
Ojiji: Testosterone decanoate bụ hormone steroid sitere na androgen na a na-ahụ ya na mammals na vertebrates ndị ọzọ, testosterone decanoate bụ nke zoro ezo na ule nke ozi na ovaries nke nwanyị, ọ bụ ezie na obere ego na-ezobe ya site na gland adrenal, testosterone decanoate bụ. ụkpụrụ nke homonụ mmekọahụ nwoke na steroid anabolic.
Otu esi echekwa
- A na-atụ aro ka ịchekwa metribolone n'ime ụlọ okpomọkụ n'okpuru 30 degrees C.
- Debe ọgwụ ahụ pụọ na ìhè anyanwụ kpọmkwem, okpomọkụ na mmiri.
- Ekwela ka ọgwụ na anya na iru nke ụmụaka.
Testosterone Decanoate nnata
10 g ntụ ntụ
16ml mmanụ grapeseed (GSO)
12g ntụ ntụ
Testosterone Decanoate eji
1 .Mmụba ọnụ ọgụgụ ọbara ọbara uhie: mkpụrụ ndụ ọbara uhie na-ahụ maka ibu oxygen na site n'ọbara, nke a na-abawanye ọkwa oxygenation ọbara ma na-akwalite ntachi obi nke muscular.
2 .Mmekọrịta Protein emelitere: Protein na-anọchi anya ihe mgbochi mbụ nke anụ ahụ.Synthesis na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ ndụ na-emepụta protein, yana nkwalite arụmọrụ nke ojiji ya na-abawanye.
3 .Ejikwa Nitrogen emelitere: na-eme ka ikuku anabolic dịkwuo elu, na-akwalite uto, ichekwa na mgbake.
4 .Mbelata Glucocorticoid Production: mgbe ọ dị mkpa maka ahụike anyị na-emebi anụ ahụ ma na-akwalite uru abụba anụ ahụ.
5 .Mmụba IGF-1 na-abawanye: Insulin-dị ka Growth Factor-1 (IGF-1) bụ homonụ peptide sitere n'okike na-emepụta nke dị oke anabolic, dị mkpa maka mgbake ma na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sel niile dị n'ahụ mmadụ.
Testosterone Decanoate usoro onunu ogwu
Testosterone Decanoate Cycle maka ụmụ nwoke
Maka okirikiri decanoate dị elu ị nwere ike were500 mg maka izu 8 ruo 12
Nke a bụkwa ogologo okirikiri ọkọlọtọ maka ọtụtụ ndị ọzọ T boosters, ma ọ bụrụ na jikọtara ya na mgbatị ahụ siri ike na nri dị mma ga-arụpụta nsonaazụ pụtara ìhè. Otú ọ dị, e nwere ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ewe ihe karịrị nke ahụ n'ihi na ha na-achọkwu ihe gbasara uru arụmọrụ. .
Ọ bụrụ na ị gụọ onwe gị n'etiti ndị ahụ, mụbaa dose na 750 mg na ị ga-ahụ ọganihu n'ihe gbasara arụmọrụ anụ ahụ gị. Ndị ọzọ na-ewere ya ntakịrị karịa ma were ihe dị ka 1000 mg kwa izu.Usoro ọgwụgwọ dị elu na-esonyekwa na mmụba nke ogologo okirikiri site na 8 ruo 12 ma ọ bụ 16 izu.
Nke gara aga: Testosterone Steroid nke nwere ike ịgbanye ọgwụ mgbochi Testosterone Cypionate / Nnwale Cyp maka uto Muscle CAS 58-20-8
Osote: Testosterone Fat Burning Enanthate CAS 315-37-7 Testosterone Steroid maka Mbelata ibu
Hormone Uto akwara Boldenone Acetate Bulking...
Na-ewulite akwara anabolic steroid ntụ ntụ ...
S-23 SARMs Mmeju arụrụ ahụ Maka akwara...